Dzidziso: sei Unzip RAR paLinux uye compress | Linux Vakapindwa muropa
Inogona sei unzip RAR paLinux? Sekuziva kwese munhu, RAR inomiririra Roshal Archive uye iri fomati yekudyidzana ine isina kurasikirwa compression algorithm. MuWindows unogona kuwana WinRAR, pakati pevamwe, iyo inogona kumanikidza uye kudzikisira mapeti erudzi urwu. Kunyangwe RAR ichinonoka kupfuura ZIP, ine yakakwira compression mwero uye zvirinani dhata redundancy.
Kazhinji muLinux isu tajaira kushandisa tarball (tar.gz, tar.bz2, ...) ine akasiyana akanyanya maitiro ekumanikidza. Asi sekuziva kwako, WinRAR haisi kuwanikwa yeLinux, kunyangwe sezvatichakudzidzisa, unogona kushandisa RAR compressors / decompressors paLinux pasina kuenda kuWine kana chero chinhu chakadai.
1 Isa RAR compressor paLinux
2 Maitiro ekumanikidza RAR paLinux
3 Maitiro eku unzip RAR paLinux
Isa RAR compressor paLinux
Para isai pane zvakagoverwa zvakatorwa kubva kunaDebian, unogona kuita zvinotevera:
Uye kana iwe uri mune chero kumwe kugovera, unogona kunyora zvinotevera, kamwe dhawunirodha pasuru, unoenda ne "cd" kubva kuchiteshi kuenda kudhairekitori iri uye nyora:
Uye kana yaiswa, ini ndinokurudzirawo izvozvo gadza unrar (kana iwe usati uinayo). Kune izvi unogona kushandisa "sudo apt-tora kuisa unrar" kana kubva pasuru zvinoenderana neyako distro. Uye isu tinogona kutoishandisa kubva kumutsetse wekuraira. Ini ndinokukurudzira kuti uone mapeji emurume echishandiso ichi, kunyangwe iko kushandiswa kwekutanga kuri nyore.
Maitiro ekumanikidza RAR paLinux
Para compress faira kana yese yefaira:
Maitiro eku unzip RAR paLinux
Uye nokuda bvisa mune dhairekitori rakafanana kana mune rakasiyana.
Asi kana iwe uchida kuva neimwe Graphic inowanikwa kuita kuti basa rako rive nyore, isa File Roller kana GNOMERAR kana uine GNOME desktop kana Ark kana ukashandisa KDE. Unogona kubvunza iyo software centre ye distro yako kuti uvaise ...
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvekuti sei gadza zvirongwa paLinux, tinya pane iyi link yatichangobva kukusiira uye iwe uchaona kuti chero mhando yepakeji yakaiswa sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Unzip RAR paLinux
Dzidziso yakajeka kwazvo. !! Kunge vhidhiyo inotevera pane iyi nyaya: https://www.youtube.com/watch?v=KqKE1_W0eJc
Zvakanyatsotsanangurwa, maita basa.
UmBerto Rasta akadaro
hama iwe wakandibatsira kusunungura iyo faira pakupedzisira yaishanda nemirairo .. Ndatenda zvikuru!
Pindura UmBerto Rasta
Oscar Sanchez Guevara akadaro
Ini ndinotumira ini meseji yekuti rar package yapera :(
Pindura kuna Oscar Sánchez Guevara
Francisco rp akadaro
Ini ndatanga kufambisa cnc neLinux uye ndinoda kushandisa arduino pakombuta imwe chete.
Pindura kuna Francisco rp
Iyo faira ini yandiri kuda kuvhura inonzi Client Pasina Music Mu Alianza 2018.rar <-
Kana ini ndichinyora mune terminal, ini ndinowana NameError: zita 'Client_Sin_Musica_Mu_Alianza_2018_rar' haina kutsanangurwa
Handizive zvekuita anondibatsira
Pindura kuna Luther
Kune mafaera ane nzvimbo muzita ravo, inofanirwa kuiswa mumakotesheni ekudzivirira zvikanganiso, semuenzaniso: unrar x "Mutengi Asina Mumhanzi Mu Alianza 2018.rar".
sezvazviri zvinogara zvichishandira vamwe, kune vamwe hazvishande
Kuti ushandise Linux unofanirwa kuve nemoyo murefu waJobho
kufunga kuti mumawindo pane maviri akadhiza,….
OJo izvo zviri nyore kupfuura zvinoita, kana iwe ukaisa rar unrar, yatovepo kumanikidza kubva kune inoenzanisira nharaunda, mune yangu kesi ini ndinoshandisa ubuntu uye ndinongodzvanya kurudyi uye compress, ndakagadzirira izvozvi zvinoita sekushandisa .rar uye decompress: D
Ndatenda zvikuru, zvakandibatsira. Ini ndakatama kubva windows ndichienda kuLinux uye zviito zviri nyore izvi hazvizive.
Ndatenda zvikuru nerubatsiro rwe «Rarear»
sudo apt kuisa rar
rar a => kumanikidza
Johan charry akadaro
Zviri nyore kuita uye zvinotsanangurwa zvakanaka. Inosimbiswa muVhura SUSE uye neAreka zviri nyore nekuti kana chirongwa changoiswa, zviyero zvakasarudzika zvemafaira akatsimbirirwa zvinogoneswa.
Pindura kuna Johan Charry
Iyo yakanakisa software ye 3D kudhinda